मुख्य पृष्ठकन्टिर-दृष्टितीन मिनेटवाला रेकर्डतोड बैठक
हाहाहा … हिजोदेखि हाँस्न थालेका कन्टिर–बाबूको हाँसो अझै थामिएको छैन । उनी लगातार हाँसी नै रहेका छन् ।
लोकतन्त्रलाई आफूअनुकूल बनाउन नेता भनाउँदाहरू कतिसम्म जायज–नाजायज काम गर्दा रहेछन् भन्ने बुझ्न एकटक प्रदेश १ को प्रदेशसभाको बुधबारको काम–कारबाही हेरे हुन्छ । खासमा कन्टिर–बाबूको हाँसोको कारण पनि यही नै हो ।
बुधवारदेखि बस्ने भनिएको प्रदेशसभाको बैठक तीन मिनेट पनि चल्न दिइएन । सभाकक्षका कुर्सीलाई नट–बल्टु ‘टाइट’ गरेर पहिल्यै जगहँसाइ भइसकेको प्रदेश १ को प्रदेशसभालाई बुधबार फेरि जगहँसाइको अर्काे माध्यम बनाइयो ।
नेपालको संसदीय इतिहासमा सायद हिजो यहाँ एक कीर्तिमान नै बनेको छ– विधायिकाको सबैभन्दा छोटो बैठक । सभामुखले प्रदेश प्रमुखको पत्र पढेर अर्काे सूचना नहुञ्जेलसम्मका लागि बैठक स्थगनको सूचना जारी गरे ।
यो निश्चय पनि मुख्यमन्त्रीविरुद्ध प्रदेशसभामा विचाराधीन अविश्वासको प्रस्तावमाथिको छलफल रोक्ने रणनीति हो, यसमा शङ्का छैन । यस्तो पृष्ठभूमिमा कन्टिर–बाबू विश्वस्त छन्– ‘धनशेर’बाबू जबसम्म आफूलाई सुरक्षित भएको अनुभूत गर्दैनन्, प्रदेशसभाको बैठक बस्नेबाला छैन । किनभने धनशेर–बाबू ओल्बाकै चेलुवा न हुन्, आखिर । यस्ता धाँसु आइडिया त उतैबाट आउने होलान्, कि कसो धनशेरजी ?
कन्टिर–बाबूको मनमा एउटा अर्काे कुरा पनि खेल्दै छ– अरे करदाता जनता हो, हिसाब गर्नुभएको छ ? हिजोको बैठकका सन्दर्भमा कति खर्च भयो होला ? बैठक त चलेन तर प्रदेशसभाका सदस्यले भत्ता त छोड्नेवाला छैनन् । अब भन्नुस् … कुनै पनि ‘बिजनेस’ नभएर स्थगित गरेको भनिएको प्रदेशसभाको त्यो तीन मिनेटवाला बैठक करदाता जनताका लागि कति महँगो पर्‍यो ?
जगहँसाइ प्रदेशसभा बिजनेस